ပုည font ကို ဘယ်လို install လုပ်နပီး ဘယ်လို အသုံးင်္ိပရြမလဲ…?
1. http://mamboforge.net/frs/download.php/6224/PonNya_Web_v1.1.zip ထဲမဋ္ဋ PonNya_web Installer ကို Download လုပ်နပီး Install လုပ်ပြ။
2. PonNya_Web font ကိုတော့ C:\_Windows\_Fonts folder အောက်ထဲ copy ကူးထည့်ပြ (သိုဿ) Control Pannel အတ့င်းရဋ္ဋိ Fonts မဋ္ဋလည်း Install လုပ်ြိုင်ပသြည်။
3. Install လုပ်နပီးပကြ Start > All Programs > Tavultesoft Keyman > Keyman ကို click ခေက်ြနပီး run ပြ။
4. Task Bar မဋ္ဋာ ရဋ္ဋိတဲ့ နာရီ ဘေးမဋ္ဋာ Tavultesoft Keyman 6.0 icon လေးတှေ့ရပလြိမ့်မယ်။ ၎င်း icon မဋ္ဋာ Keyman ၏ မူလ icon အတိုင်း K icon လေး င်္ိဖစ်နေသည့် အခ္လိန်တ့င် ပုည font ငေ်္ိပာင်းနပီး ရိုက်ထားသော စာမ္လားသည် English လို ပေပြလြိမ့်မည်။
5. င်္ိမန်မာလို ရိုက်ခ္လင်ပကြ ၎င်း icon ပေတြ့င် click ဋ္ဋြိပ်ပြ။ ပေလြာမယ့် pop-up menu ထဲမဋ္ဋ myanmarmtn ကို ရေ့းပြ။ K icon မဋ္ဋ င်္အိဖရြောင် နောက်ခံင်္ိဖင့် P icon သိုဿ ငေ်္ိပာင်းလဲသ့ားပလြိမ့်မည်။ ယင်းအခ္လိန်တ့င် PonNya_Web စာလုံးမ္လားကို အသုံးင်္ိပနြပီး င်္ိမန်မာလို ရိုက်ြိုင်ပသြည်။
6. English လို ရိုက်ခ္လင်ပကြ P icon ပေမြဋ္ဋာ click ဋ္ဋြိပ်ပြ။ ပေလြာမယ့် pop-up menu ထဲမဋ္ဋ No Keyman Keyboard ကိုရေ့းခ္လယ်ပြ။
7. ပုည၏ လက်က့က်မဋ္ဋာ Windows 3.x ခေတ်တ့င် အသုံးင်္ိပခြဲ့သော ၀င်းင်္ိမန်မာFonts (-Win---Innwa) စာလုံးမ္လား၏ လက်က့က်ဋ္ဋြင့် တူပသြည်။ ဥပမာ “မ္ဒြလေး” ဆိုသည့် စကားလုံး ရိုက်မည်ဆိုပကြ “မ” အတ့က် “r” -> “ြ” အတ့က် “E” -> “-္ဒ“ အတ့က် “Ctrl + Alt+ Shift + w” -> … စသည်င်္ိဖင့် ရိုက်ဋ္ဋြိပ်ပေးရပသြည်။
က္လတော် အသုံးင်္ိပဖြူးတဲ့ ဒီ PonNya နဲဿ Myanmar1 ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ ဆိုရင် ဒီ PonNya Font ကို ပိုရကိက်ြတယ်ဗ္လာ။ က္လတော့်အတ့က် သုံးရတာ ပို အဆင်ငေ်္ိပတယ်။ ပုညစာလုံးရေးတဲ့ သူနဲဿ က္လတော် လုံးဝ လုံးဝ မသိပြ။ ဒပြေမယ့်ဗ္လာ သူကို က္လတော် လေးစားတယ်။ သှူအရင်ထ့က်နေတဲ့ င်္ိမစေတီက ဖောင့်ကိုတော့ အလကားပေးတယ်၊ စာရိုက်ဖိုဿ လက်က့က်ကိုတော့ အလကားမပေးဘူး။ သူက အကုန်လုံးကို အလကားပေးလိုက်တယ်။ ဒငြေ်္ီကာင့် ပုည ဖန်တီးရဋ္ဋင်ကို က္လတော် လေးစားတယ်။
၀င်း-င်္ိမန်မာနဲဿ ရိုက်ထားတဲ့ င်္ိမန်မာစာတေ့ကို ပုည ယူနီကုတ် ငေ်္ိပာင်းခ္လင်ရင် ဒီ http://devmm.net/ponnya.php မဋ္ဋာရဋ္ဋိတယ်ဗ္လာ။
ဒကြတော့ ပုည ဖောင့်ပိုင်ရဋ္ဋိရှဲ installation လုပ်နည်းပြ။
Install Font:On Windowscopy "PonNya_Web.ttf" to c:\_windows\_fonts
On Linux1. copy "PonNya_Web.ttf" to /usr/share/font/ttf/default on Linux2. type mkfontdir on above path3. type mkfontscale on above path
Install Keyboard:On Windows1. Run PonNya.exe to install keyboard2. When you want to type, just run TavulteSoft Keyman and choose PonNya Keyboard
On Linux1. Install keyman for Linux... This software can get from www.SIL.org2. Convert kmx to Linux compactiable type.3. Install it to Keyman runtime for keyman.
Keyboard Layout:Keyboard Layout can see on Package. name Keyboard_Layout.bmp.
any question,any doubtplease feel free to contact
We do appreciate your interest :P
Please use myanmar1 opentype font for unicode standard. I had tried all available myanmar unicode fonts available including ponnya_web. I had also written on this issue here.
I have heard that the man who created Ponenya font is Ko Zaw Lin. I m not so sure.
က္လတော်ကတော့ myanmar1 ထက် ponnya_web ကို ပိုရကိက်ြတယ်ဗ္လာ။ က္လတော့် အတ့က်တော့ myanmar1 ဟာ PonNya လောက် အဆင်မငေ်္ိပသေးဘူးဗ္လာ။ က္လတော်တိုဿ လ့တ်လပ်စ့ာ သဘောထား ကဲ့လြဲို့င်င်္ီကပတြယ်ဗ္လာ။
PonNya ကို တီထ့င် ဖန်းတီးသူက ကိုက္လော်လင်းပြ။
I wrong these two names.
Ko Zaw Lin is my friend.
Hehe sorry bro.
sghehiwnvမ နမြ တြ
႙႙I'm sorry, I'm just testing how this work, i really dont know how to type yet.
Seem like PonNya is working.
One thing i dont understand what's PonNya_Web.kmx from zip file do? Do i need to place that in somewhere or can delete that or ... your post didnt say anything about that file.
Keyman icon က P ပုံငေ်္ိပာင်းသ့ားနပီ ဆိုရင် ပုညစာလုံး ငေ်္ိပာင်းထားနပီးနပီ ဆိုရင် စာရိုက်လိုဿ ရပနြပီ။ ၀င်းအင်းဝ လက်က့က်နဲဿ အတူတူ ပပြဲ။ အနည်းငယ် ကဲ့လဲ့မ႙တော့ ရဋ္ဋိပတြယ်။ download လုပ်ထားတဲ့ထဲမဋ္ဋာ လက်က့က်ပုံစံ jpg ဖိုင်ပပြတြယ်။
PonNya_Web.kmx ဖိုင်က ၀င်း-အင်းဝ လက်က့က် ပုံစံ ရိုက်လိုဿရအောင် လုပ်ပေးတဲ့ Keyboard Driver ဖိုင်ပြ။ PonNya ကို install လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒီဖိုင်ကို လုပ်ရမဋ္ဋာ မဟုတ်ပဘြူး။ PonNya.exe ဖိုင်ကို double click လုပ်နပီး install လုပ်လိုက်ရင် ရပနြပီ။ PonNya_web.kmx keyboard file ကိုပြ install လုပ်ပေးပလြိမ့်မယ်။
Oh ic. that's keyboard file then.
Since i installed the ponya exe it should be fine for both.
I'm still learning how to type in mm. Dont know wininnwa or ponya yet.
I want to know one thing.pls
Is Ponya an open unicode.
I mean, can everybody use Ponya at both personal and business.
ဘယ် Link မှ သွားလို့မရပါဘူး ကျေးဇူးရှင်ရေ.. ဘာဖြစ်တာလဲ ပြောပါအုံး
ကြာလှပြီလေဗျာ... ဘယ်ရပါ့မလဲ... တင်ထားတဲ့ ရက်စွဲကိုလည်း ကြည့်ပါဦး... အခု ကျတော် Zawgyi-One ကို သုံးနေပါတယ်...